Home Wararka Mareykanka oo aqoonsaday Axmed Madoobe, caadaadisna saaraya Farmaajo
Mareykanka oo aqoonsaday Axmed Madoobe, caadaadisna saaraya Farmaajo
Sida diblomaasiyiinta beesha caalamka laga soo xigtay, waxaa jira cadaadis dowada Mareykanka, gaar ahaan safiirka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto uu ku saarayo Madaxweyne Farmaajo inuu la shaqeeyo maamulka Jubaland, ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe.
Axmed Qoor Qoor aya lagu eedeeyay musuqmaasuqii ugu weynaa intii aha maareeye ku xigeenka dekedda Muqdisho. Warbixintii ay qortay Qaramada Midoobay aya lagu sheegay in Axmed Qoor Qoor uu lunsaday malaayiin doollar. Waxaa la yaab ku noqotay shacabka Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah diblomaasiyiinta beesha caalamka sida uu Donald Yamamoto u taageeray doorashada Axmed Qoor Qoor.
Intii MOL aan ku guda jirnay uruurinta macluumaadkan, waxay dowladda Mareykanka ay soo saartey war-qoraal ah [Halkan ka akhri], oo ay ugu baaqayso madaxda shanka maamul goboleed iyo dowladda Federaalka inay dib usoo celiyaan wadashaqeyntii ka dhaxaysay, islamarkaana ay iska-kaashadaan amniga, la dagaalanka Al-Shabaab iyo siyaasad loo dhan yahay, si dalka uga dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah.
Waxay dowladda Mareykanka sidoo kale ku baaqday dib u heshiisiin iyo inay madaxda Villa Soomaaliya ee waqtiga kasii dhamaanayo iyo kuwa maamullada isagu yimaadaan kulan bilaha nagu soo wajahan.Qoraalka Safaaradda ayaa ka muuqday inuu isbedel ku yimid mowqifkii hore ee dowladda Mareykanka ee ku wajahnaa maamulka Jubaland, iyadoo hadda loogu yaarey Axmed Madoobe Madaxweyne, halka markii hore hogaamiye ku tilmaami jirtay.
Dowladda Federaalka oo horey u diiday inay la shaqeyso maamulka hadda ka jira Jubaland, ayaa wararka hoose ee uu helayo MOL sheegaya in ay soo saari doonto war-saxaafadeed Axmed Madoobe Madaxweyni ugu yeeri doonto, shirka la filayana ay ku casuunto kadib cadaadis Mareykanka.
Gudaha Soomaaliya, Mareykanka waxaa ka jooga ciidamo, qaarkood ka howlgala Jubaland, waxaana khilaafka siyaasadeed ee madaxda Villa Soomaaliya iyo maamullada u arkaa inuu curyaaminayo howlgalka la-dagaalka argagaxisadda [counter-terrorism operations].